China Aluminium pani-YA103 vagadziri uye vanotengesa Yingjiwei
Kutevedzera marble pani
Kubaya art pani
UV yekudhinda pani
Wood huni pani
Punching art pani YA602
Modelling pani YA312
Modelling pani YA311
Modelling pani YA104
Kutevedzera machena pani YC104
Kutevedzera machena pani YC103
Kutevedzera machena pani YC102
Kutevedzera machena pani YC101
Wood huni gorosi pani YC205
Wood huni gorosi pani YC203
Wood huni gorosi pani YC202
Zinga rejecha YB102
Nyika Yakatangira: China
Trade mazwi: EXW, FOB, CFR uye CIF
Lead nguva: Mazuva 7-20 anoenderana nehuwandu.
Port yekutakura: Guangzhou kana Shenzhen
Miripo yemitemo: T / T kana L / C.
Zvimiro zvealuminium pani
1. Kurema kwechiedza, kukwirira kuomarara uye simba.
2. Kunaka kwemamiriro ekunze uye anti-corrosiveness zvivakwa.
3. Aluminium iri ductile uye ine yakadzika yakanyunguduka poindi, Iyo inotibvumidza isu nyore kuumba aruminiyamu mapaneru kune izvo zvinodiwa nezvinodiwa. Inogona kugadziriswa mumhando dzakaomarara sekugadzirwa
4. Multicolors kusarudza.
5. Nyore kuchenesa uye kuchengetedza.
6.Nyore kuisa. Iyo aruminiyamu keteni remadziro pani yakagadziriswa mufekitori uye yakatarwa pane furemu isina kucheka panzvimbo yekuvaka.
7. Yakagadzikana nharaunda, inogona kuve 100% yakashandiswazve.
Aluminium pani inowanzo kuverengerwa nepaneru, yekuomesa, aluminium kona nezvimwe zvinhu. Iyo imwe yemhando yekuvaka yekushongedza zvinhu, iyo inoshandisa mhando yepamusoro yealuminium alloy ndiro sechinhu chepasi, uye wozopfuurira mukobvu yakasarudzika, hukuru uye kuomesa zvimiro nemabatiro akasiyana pamusoro pechiso, fluorocarbon kupfeka ndiko kusarudza kwekutanga. Iyo yekupenda maitiro inowanzo kuve yakakamurwa kuita mbiri kupfeka, matatu kupfeka kana mana kupfeka. Fluorocarbon kupfeka ine yakanakisa ngura kuramba uye mamiriro ekunze, inogona kuramba acid mvura, munyu muspray uye dzakasiyana siyana mhepo inosvibisa, yakanakisa kutonhora uye kupisa kuramba, inogona kudzivisa yakasimba ultraviolet mwaranzi, inogona kuchengetedza kwenguva refu isiri kupera, isiri yekupoda, hupenyu hurefu hwehupenyu.
Mhando dzekurova art veneer: punching pateni, kuumba kubaya, inorema kubaya, Ultra yakatetepa kubaya, micro gomba kubaya, mutsara kucheka kubaya, laser kubaya, etc.
Isu tinoremekedza zvakasikwa uye tinowirirana nepamusoro-mhando dhizaini dhizaini yezvisikwa. Kana maindasitiri nekuchinja kwemaguta zvachinja nzvimbo yedu yekugara, mhizha dzedu dzinoedza kutsvaga nzvimbo inoenzanirana uye yekuzvivandudza, kubereka chimiro chechipiri, nekushongedza nzvimbo yedu yekugara. Senge mifananidzo yakavezwa yakasarudzika yemaguta hunhu tsika, hunhu hwekuvaka, hunhu nzvimbo, hunhu mweya. Vagadziri vedu vanonyora zvakanyatso shanduko yeguta.
Chigadzirwa zita Aluminium pani
Chinhu It. YA103
Aluminium chiwanikwa 1100 H24 / 3003 H24 / 5005
Surface kurapwa PVDF kupfeka / Powder unhani / Anodized / UV kudhinda, emobssing
Ruvara Chero chero RAL ruvara, akasimba mavara, esimbi mavara, huni zviyo, kutevedzera machena uye dombo
Ukobvu 1.0mm / 1.5mm / 2.0mm / 2.5mm / 3.0mm / 4.0mm / 5.0mm
Saizi 600 x 600mm / 600 x 1200mm / 1300 x 4000mm / yakagadzirirwa saizi
Kavha Yakajairwa kutumira kunze huni crate
Maitiro ekugadzirisa Kugadzira zvinhu, kucheka, kupeta, kukotama, kukombama, kusunga, kusimbisa, kukuya, kupenda uye kurongedza.
Zvishandiso Inokodzera zvemukati nekunze, matanda nemakoramu, balcony, awnings, lobby facade, hotera, chipatara, chivakwa chekugara, villa, chiteshi, jimunasiyamu, airport, zvitoro, opera, nhandare, chivakwa chehofisi uye skyscraper
Zvadaro: Perforated pani-YA313
Meya weDingxi Guta, Gansu Dunhu ...
Kambani: Foshan Guta Nanhai Yingjiwei Aluminium Zvivakwa Zvekuvakisa Co., Ltd.
Kero: Kwete 1, Hejing South Road, Phase 1, Hegui Ind. Zone, Heshun, Lishui Town, Nanhai Dist., Foshan, Guangdong, China
© Copyright - 2010-2021: All Rights Reserved. Zvinowanikwa Zvigadzirwa, Sitemap, Zvese Zvigadzirwa